केस्रा: March 2014
रेखा कविताको प्रारम्भिक परिचय
रेखा कविताको यो समयको कविता हो । यसमा खास गरी समय बगाएका छौँ । यो जीवन र जगत् हेर्ने दृष्टिकोण, भावना प्रस्तुत गर्ने संरचना र लेखाइको पहिचान हो । यसमा दृश्य,अदृश्य, भावना, समय र क्षितिजको प्रस्तुती छ । यसलाई अहिलेसम्म ५ देशबाट १२ जना कविहरू लेखिरहनु भएको छ । ती कविहरू-
१. देश सुब्बा-हङकङ
२. टंक सम्बाहाम्फे-हङकङ
३. बिमल रार्इ -हङकङ
४. डि.बि. पालुङ्वा-हङकङ
कृष्ण लिम्बू जीका केस्राहरु
शीतको थोपा बिलाउदैँ
फर्की आयो फेरि बिहानी
सुन्दर दृश्य दिलाउदैँ
अधेरी रात बिलाउदैँ
आयो उजेली मिलाउदैँ।
सपनीमा मेरो देश रुदै थियो
आँशु दिई खुशी खोई कस्ले लियो
मेरै सामू गुनासो त्यो पोखे पछि
नेपाली यो मन मेरो वहकियो
बाँचा र बचाउ भनि रुदै थियो
छाती भारी खोई कस्ले पिडा दियो।
जान्छौ भने जाउ
किन खोज्छौ भाउ
नहेर भो दाउ
अन्तै मायाँ लाउ।
वर्णविन्यासका समस्या र चुनौती
- विन्दु बस्याल
वर्णविन्यास वर्णहरूको रखाइक्रम हो । वर्णविन्यास भन्नाले वर्ण, अक्षर, शब्द, मात्रा वा ध्वनिलाई सार्थक बनाई अर्थात् स्पष्ट र उपयुक्त अर्थ आउनेगरी क्रमपूर्वक व्यवस्थित रूपमा राम्रोसँग मिलाएर प्रयोग गर्नु भन्ने बुझिन्छ । यस अन्तर्गत वर्णहरूलाई त्रुटिरहित र उपयुक्त चिन्हहरूको उचित प्रयोग गरी लेख्ने योजना र नियमहरू समेटिन्छन् । शब्द निर्माण र वाक्य गठनजस्ता भाषिक अभिव्यक्तिका क्रममा वर्णविन्यासले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । यसलाई नेपालीमा हिज्जे, खिप्ती, वर्तनी, अक्षरी पनि भनिन्छ ।
अहिले वर्णविन्यास एक समस्याको रूपमा देखिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ ले यहाँ बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाली भाषा राष्ट्रभाषाका साथै सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा रहेकाले यहाँ बसोबास गर्ने सबै जातजाति र भाषाभाषीका लागि बाध्यात्मक भाषा बन्न पुगेको छ । नेपाली भाषा बोल्न सजिलो छ, तर लेख्न भने
अन्जानमा या त जानेर
नजरको तीर हानेर
सामाजीक यो संजालमा
कागलाई कोइली ठानेर
काग भन्दा भन्दै जानेर
बसेँ छु हितैषी मानेर ।
यता चिरी मुटु अन्तै साट्यौ
निष्ठुरी रहेछौ डाँडै काट्यौ
स्वार्थी भएछौ धनको मोहमा
धनिसँगै घरबार आँट्यौ
तन मन अब अन्तै साट्यौ
तिमीले मेरो माया नै छाँट्यौ।
सन्तोष माबुहाङ्ग "अनसन"
सन्तोष माबुहाङ्ग "अनसन" जीका केस्राहरु
- सन्तोष माबुहाङ्ग "अनसन"
शब्द जाल बुन्छ
पागल नै हुन्छ ।
अहिले बनेको छु म त प्रवासी
काम चांहि पर्यो है मेरो खलासी
कामप्रति ईमान्दारी भै दिनाले
आज मालिकबाटै पाएँ स्याबासी
कर्मथलोको अर्को नाम प्रवासी
जिन्दगी बिताउंदै छु हासी-हासी।